हजारको नोटमा छापिने भाग्यमानी हात्ती राम लक्ष्मण ! – Enepali News
हजारको नोटमा छापिने भाग्यमानी हात्ती राम लक्ष्मण !
July 27, 2020 346
९ साउन, चितवन । हात्तीले जुम्ल्याहा सन्तान जन्माउनुलाई विश्वमा निकै दुर्लभ घटना मान्ने गरिएको छ । गर्भाधान भएको सरदर २२ महिनामा बच्चा जन्माउने हात्तीले प्रायःजसो एउटा छावा मात्रै जन्माउछ ।
तर, झण्डै १२ वर्षअघि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको हात्ती प्रजनन केन्द्रमा पालिएको देवीकलीले एकै बेतमा पाएकी थिई राम लक्ष्मणलाई ।
चितवनमा २०४२ सालमा स्थापना गरिएको प्रजनन केन्द्रमा जुम्ल्याहा हात्ती जन्मेको यो पहिलो घटना थियो । अहिले यिनै राम लक्ष्मणको तस्वीर नेपालमा प्रचलन हुने एक हजारको नोटमा राखिएको छ । अहिलेको तस्वीर उनीहरु पाँच बर्षको उमेर हुँदाको हो ।
नेपाली नोटमा विदेशी हात्ती प्रयोग भएको गुनासो उठेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालमा पाइने हात्तीको तस्वीर राखेर नोट प्रकाशन गरेको छ । साउन ७ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको नोटको बाँयातर्फ सगरमाथाको चित्रसमेत छ ।
यसअघिका एक हजारको नोटमा एउटा मात्रै हात्तीको चित्र अंकित थियो भने अहिलेको नोटमा दुईवटा हात्ती रहेका छन् । राम र लक्ष्मणले अहिले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षामा खटिइरहेका छन् । रामलाई अहिले सौराहाको हात्तीसारमा राखिएको छ भने लक्ष्मण कसराको हात्तीसारमा छन् ।
हात्तीको जुम्ल्याहा निकै दुर्लभ मानिने रुपाखेतीले बताए । ‘थाइल्याण्डमा जुम्ल्याहा जन्मिएको तर बचाउन नसकिएको घटना मैले सुनेको थिए । अरु ठाउँमा जुम्ल्याहा जन्मिएको सुनेको छैन’ उनले भने ।
उनीहरुलाई तीन वर्ष ६ महिना पुगेपछि दुई जना कर्मचारीले तालिम दिएका थिए । तालिमपछि निकुञ्ज सुरक्षामा यी दाजुभाइ जुटिरहेका छन् । राम दाजु हुन् भने लक्ष्मण भाइ हुन् । यी दुबै भाले हात्ती हुन् ।
आमा देवीकलीको कोखबाट जन्मिएका राम र लक्ष्मण बाबु रोमियो हो । जंगली भाले हात्तीले नै केन्द्रमा रहेका पोथी हात्तीलाई गर्भाधान गराउने गर्छन् ।
रोमियोले समय समयमा मानव वस्तीमा गएर वितन्डा पनि मच्चाउने गर्दछ । विगत लामो समयदेखि प्रजनन् केन्द्रमा पालैपालो रोमियो र ध्रुबेले प्रजनन् गराउँदै आएका छन् ।
Prevओखलढुङ्गामा दुई दर्जन भन्दा बढि बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा
Nextकोरोनाले लियो स्याङ्जाका युवा रोशन श्रेष्ठको ज्यान।
पुर्व युवराज पारस सत्याग्रहीलाई भेट्न पुगे ह्याम्स अस्पताल
अझै पाँच दिन भारी वर्षा हुने
भाइरल भिडियोको यथार्थ : ससुराले कुटे, श्रीमान‍्ले भिडियो बनाए
बल्ल डराए ट्रम्प : इतिहासमै पहिलोपटक अमेरिकाका ५० वटै राज्यमा संकटकाल घोषणा (3555)
कोरोनाका कारण विदेशमा बसेका सबै नेपालीलाइ नेपाल फिर्ता पठाउन सकिने सम्भावना (2719)
कोरोना भ्याक्सिनको उत्पादन नै सुरु, चीन र भारतसहित ७ वटा कम्पनीमा उत्पादन हुँदै (2414)
सरिता गिरीविरुद्ध रमेश पर्साइले मुद्दा हाल्दै, साथ दिनेले सेयर गराै (1822)
श्रीमानले पि’टेर भागेपछी लक डाउनमा आमा छोरीको यस्तो बिचल्ली, मनै रुवाउने भिडियो हेर्नुस (1738)